Finland iyo Somaliland oo heshiis ka gaaray soo celinta dadka | Somaliska
Mid ka mid ah maamulka Hayda Socdaalka Finland oo lagu magacaabo Matti Heinonen ayaa dhawaan booqasho ku tagay Somaliland halkaasoo uu heshiis kula galay dowlada in ay soo dhaweyso dadka Finland ay dib u soo celiso.
“Waxaan wada hadal la galnay dowlada Somaliland oo aan heshiis ku kala saxiixay ku saabsan Soo noqoshada xorta ah” ayuu Matti u sheegay wakaalada wararka Finland.
Ninkaan ayaa warbixinta uu ka keenay Somaliland ku sheegay in ay tahay goob xasi looni ka jirto oo dhibaatada keliya ay tahay sabool nimo, isagoo intaas ku daray in koonfurta Soomaaliya ay ka jirto colaad oo aysan ku talineyn in dadku ay ku laabtaan halkaasi.
Hayda Socdaalka ayaa qofka iskiis u noqonaya waxay ka bixisaa tikitka iyo in la siiyo lacag gacan qabsi ah oo gaareysa ilaa 1500 euro. Matti Heinonen ayaa sheegay in ay doonayaan in ay lacagtaas u laba jibaaraan dadka ku noqonaya Somaliland.
Soomaalida Finland ku dhaqan oo tiradooda lagu sheegay 16,000 ayaa Hayda Socdaalku sheegtay in kala bar ay ka soo jeedaan Somaliland.
Waa heshiis xun.
Waxaa daba socota heshiskan in hadhow dad danbiyar kagalay finland inlagaqaato sharci hargeysana lagatuuro. Wa heshiis an lagafirsan.
maaha heshiisku saxiib sidaad moodayso anagaa joognay waxa weeyaan dhamaan dadka somalida ah ee la siiyo negative loona diido sharciga waa la celin karaa saas weeyaan….
ninkaagan jimcaale inkastoon anigu in badan ku arkay waxaad tahay nin nacaybku ka fara batay saxiib
waxaan kugula talin lahaa in mawduuca aad qorayso aad waafajiso runta waayo warkan meel aad ka soo xigatay lama hayo saxiib
Ujawaabe oo joogo Finland says:
Waxaana la celina dadga dhulkaas u dhashte ilee gobalkaas waxa waaye Feodalismi calashan koni-goosi’ wax walbana waa laka filan gara.
good somaliland waa nabad sid xamar maha loona baha in dad ka reer somaliland ay qoxoonti ahdeen wa yo waa nabad manshalhu somaliland ha noolato says:
good celiya somalilande wayo somali nimo waa diiden adunkana laga ma aqoonsno dowlad laqnsan ya hayna ma ahan shrciga markey radinayaan somali ban ahay markey qatana somalilander baan ahay halaceliyo kuwasa sosaxiixayna markaa nilageeyo albaabkey inka xiranayaan ina ader oo ben ah ayaa kusugeyso afkaaga uraayo waa ow ka dhumanaa marka laguceliyo ilee asigaa dawarsadee .kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
dhamaan salaan sare war anaaba bara xitaa liqada reer xamarka sida erayada qaar surfiyo, burjiko iwm
tan iigu darneed mar ayaan waxaan isdhahay qofkaan imtixaan kaqaad
Xaga luqada ah waxaan weydiyay kunka shilling somaliya kalarkiisa isheeg waxuu iigu jawabay ” waa shaaaax”
Kkkkkkkkk kkkkkkk KKK
tan igu xun ayay waxay tahay qabil ee kafanaan markii somalilondon ayay isku dhii baan damiir iyo dad xuma intaas ayaa kufilan reer somalilondon kkkkkkkkkkkkkkk hahahahahahahahaah ..
asc: Jimcale waad mahad santay.
waxaan kuwaydiiyay Jimcaalow warka meeshaad ka soo qadatay waa lasheegaa sxb meesha l waayo waa xigasho adigu maad tegin finland waa diga sweden degan.
takale hadii dadka dhulkoodii lagu celiyo maa kujaban qofkii doonaa waa iska soo laaban karaa kii kalena waa iska shaqaysan karaa
Ilaahay ummadda somaliyeed haka dhigo mid caafimaad qabta oo isa saamaxda
Asc salaan kadib hadii dad u dhashay somaliland oo sharciga loo diiday lagu soo celiyo somaliland iyagoo xor ah oo aan la qasbin waxba kuma jabna, hana la yaabina in sidaasi dhacdo maxaa yeelay nabada taala somaliland ayaa suuro gelinaysa in dadka lagu soo celiyo. Idinka qudhiina reer koonfureed hadii meeshiina nabad ka jirto waa lagu soo celin lahaa kuwa sharciga loo diiday. Intaa kadib nimanka leh koonfur bay somalilander ku isku dhiibaan hadhowna somalilanders bay sheegtaa waxaan lee yahay idinkuba marbaad isku kaaya dhiibi jirteen ee xajista markiina , ninba waa maree.
Intaad qabil kufanaysin meel magaraysan.jahilnimada aya qayb nala siiyaye aan kuqanacno tusale ali burao o kale wxu leyahay jimcalow cfmid Allaha kusiyo waa jahil marka school hala aado o wax aan barano qabyaladana ha lajojiyo,